Xaalada Amniga deegaanka Amxaarada oo Qasan (Warbixin)
Goder (SRTVLIVE) 12/01/2019 Arintii iskudhaca ciidanka qaranka iyo shacabka/dablaydii gobolka waqooyiga Gonder ee deegaanka axmaarada ee dhacday labo maalmood kahor ayaa muran iyo khilaaf xoogan ka dhex abuurtay hogaaminta sare ee ciidanka iyo xukuumada deegaanka axmaarada ooy weheliyaan xisbiyada mucaaradka ah ee axmaarada iyo shacabka deegaankaas guud ahaan. Taliye kuxigeenka guud ee ciidanka mulatariga general
Trump oo kormeeray xadka Mexico una goodiyey markale Mucaaridkiisa Dimuquraadiga
Mareykanka (SRTVLIVE) 11/01/2019 Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo koox kamid ah taageerayaashiisa ayaa kormeer ku tagay gobalka Texas ee xadka laleh dalka Mexico, isagoo kulamo la yeeshay saraakiisha qaabilsan illaalada xaduuda, Trump ayaa olole ugu jira inuu helo dhaqaalaha ama miisaaniyada lagu dhisi lahaa darbiga uu doonayo inuu xaduuda Mexico ka dhiso. Waxaa asbuucii sadexaad
Madaxii Shirkada Militariga Itoobiya oo maxkamada la horgeeyey
Addisababa (SRTVLIVE) 11/01/2019 Kinfe Dagnew ayaa xabsiga loo taxaabay labo bilood kahor kadib markii lagu eedeeyey falal musuq maasuq ah, sarkaalkan sare oo kamid ahaa ragii ugu awooda badnaa xukuumadii hore ee Itoobiya ayaa loo heystaa inay lunsaday hantida Qaranka. Sarkaalkan iyo sadex kale oo kamid ah raggii la shaqeyn jiray ayaa khamiistii shalay la
Trump oo ka hadlay ismari-waaga ka taagan ansixin la’aanta miisaaniyada 2019ka
Mareykanka (SRTVLIVE) 09/01/2019 Madaxwaynaha Maraykanka ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlayo xaaladda ismari waaga ah ee ka taagan Maraykanka, tan iyo markii lagu guul daraystay in la ansixiyo miisaaniyadda dawladda ee sanadkan 2019-ka. Donald Trump waxa uu sheegay inuusan wali ka tanaasulin doonistiisa ku aadan in miisaaniyadda dawladda loogu daro in ka badan 5-bilyan oo
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaliya oo u dhoofay dalka Jordan
Jordan (SRTVLIVE) 09/01/2019 Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta u dhoofay dalka Jordan oo uu uga qayb galayo shir ay leeyihiin madaxda wadamada Carabta oo looga hadlayo Is-bedelka Cimillada adduunka iyo deegaanka. Shirkan oo diiradda lagu saarayo hanaanka wadamada Carabtu isaga iskaashanayaan hagaajinta deegaanka iyo arrimaha la xariira is-bedelka cimilada
Ilhaan Cumar oo loo dhaariyay xubin-nimada Congress –ka Mareykanka
Mareykanka (SRTVLIVE) 04/01/2019 Ilhaan Cumar ayaa si rasmi ah loogu dhaariyey in ay ka mid noqoto mudanayaasha xisbiga demoqraadiga ee Aqalka Wakiilada labada sano ee soo socota, markaasoo ay dib u tartami doonto. Ilhaan waxa ay ka mid noqoneysaa Koongareeska 116-aad ee dalkan Maraykanka. Dadka Muslimka ah iyo Soomaalida Maraykanka ayaa si weyn usoo dhaweeyey
Mooyaale iyo majara habaabinta OMN TV
MOOYAALE (SRTVLIVE) 04/01/2019 TV ga gaarka looleeyahay ee OMN ayaa shalay iyo maanta ilaa 12 jeer kusoo cel-celiyay baahinta waraysi ay si wadajir ah uga qaadeen masuuliyiinta gobolka Borana ee oromiya iyo hogaaminta dhaqanka oromada ee gobolkaas oo uu kamid ahaa ugaaska (abbaa gadhaaga) beesha Gabre (Gabre waa beel kamida beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan
Shiikh Hasina oo mar kale noqotay ra’iisal wasaaraha Bangladesh
Bangladesh (SRTVLIVE) 31/12/2018 Ra’iisal wasaaraha dalka Bangladesh Sheekh Hasina ayaa mar saddexaad loo doortay xilkaasi ka dib doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday shalay oo Axad ahayd, sida uu sheegay guddiga doorashooyinka dalkaasi. Xisbiga Sheekh Hasina ayaa heshay 281 ka mid ah 350 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka dalkaasi, waana kuraas ka badan
Faahfaahin: Abaabul ciidan oo ka socda Jubbaland
KISMAAYO (SRTVLIVE) 30/12/2018 Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG Jubbaland ayaa laga dareemayaa diyaargaroow xooggan iyo abaabul ciidan oo ku aadan howlgallo uu madaxweynaha Jubbaland ku dhawaaqay oo la filayo in dhawaaan ay ka bilowdaan degmooyinka iyo deegaanada Jubbaland. Howlgalladan oo uu madaxweynuhu sheegay in lagu xoreyn doono gobolka J/hoose oo ay si buuxda gacanta ugu
Ciidan iyo shacab madagaalami karaan? Cadaytu, Cundhufo iyo Garba-ciise
Garba-Ciise (SRTVLIVE) 30/12/2018 ESAT Radio ayaa khadka telefoonka ku waraysatay wiil soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo sheegay inuu joogo deegaanka maalmahanba dagaalku kasocday ee Cadaytu, Cundhufo iyo Garba-ciise (magiciisu wuu idhaafay) ayaa sheegay in ciidanka liyu police ka canfartu sadexdii maalmood ee udambaysay duulaan ay kusoo qaadeen deegaanada Cadaytu, Cundhufo iyo Garba-ciise 6 qof oo
Madaxwaynaha Benshangul Gumuz Ashadli Hassen oo markale isku daygii Xilkaqaadista kabadbaaday
Benshangul-gumuz (SRTVLIVE) 29/12/2018 Wararka naga soo gaadhaya deegaanka Benshangul-gumuz ayaa sheegaya maanta kulan degdeg ah yeeshay golaha baarlamaanka Benshangulka waxaana xilalkoodii waayay Madaxwayne kuxigeenkii, afhayeenkii baarlaman &kuxigeenkiisii, wasiirkii xeer ilaalinta, wasiirada caafimaadka,auditka, iyo qaarkale oo badan guudahaan waxaa xilalkoodii waayay 18 kamida golaha fulinta deegaanka oo intoodabadan la sheegay inay iscasileen, Dhankakale waxaa xasaanadii xildhibaanimo
Maxkamda ciidamada qalabka sida oo maanta riday xukun dil toogasho ah
Muqdisho (SRTVLIVE) 29/12/2018 Maxkamada Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta oo ay tahay 29-ka bisha 12-aad 2018 xukun dil toogasho ah ku fulisay Maxamed Aadan Cali Booroow oo horay maxkamadu ay sheegtay in uu sheekh Caan ahaa dil ugu geystay magaalada Baydhabo. Maxamed Aadan Cali Booroow ayay maxkamdu sheegtay in 15-kii
Bahardar university oo xiisadaysan (warbixin)
BAHARDAR (SRTVLIVE) 29/12/2018 Ardaydii iyo macalimiintii jaamacada Bahardar ee qowmiyada oromada oo kasoo haajiray Finfine na soo galay. Xiisad muddo todobaad ahba ka dhex aloos nayd Ardayda Jamaica Bahardar ee labada qowmiyadood ee ugu tirada badan qowmiyadaha dalka itooba oo mudadaasba warbaahinta dalku ka maaganaysay shaacin teeda ayaa sii durugtay. Sida ay ugu warameen TV
Dad qaba cudur halis ah oo ku firxaday magaalo
Beni (SRTVLIVE) 29/12/2018 Dibedbaxayaasha ku sugan magaalooyinka Goma iyo Beni ayay booliiska ku kala eryeen sunta dadka ka ilmeeysiisa kadib markii dibedbaxayaal caraysan ay weerar ku qaadeen xarun caafimaad oo lagu daaweeynayay dadka qaba cudurka Ebola. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay Bariga magaalada Beni oo ka mid magaalooyinka mucaaradku ay ku badanyihiin oo doorashadii
Xaaf oo baaq ka soo saaray dagaallo ka socda deegaanno ka tirsan Gobollada Hiiraan iyo Mudug
Galmudug (SRTVLIVE) 26/12/2018 Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle ayaa ku baaqay in si shuruud la’aan ah loo joojiyo dagaalka ka socda degaanka Dudan Cade ee duleedka Degmada Maxaas iyo dagaalka ka socda deegaanka Kaxandhaale ee gobolka Mudug. Xaaf ayaa sheegay in Galmudug ay ka go’antahay in si dhaw xal u helida arinta ay uga kaashato
Page 4 of 831‹ Previous12345678Next ›Last »